Amanani e-pepephone kanye nokushajwa kabusha kweselula
Shaja kabusha iselula ye-Pepephone
I-Pepephone inkampani yesevisi yeselula ebiza kancane. Kuyi-opharetha yezokuxhumana leyo wazalwa ngoNovemba 2007 futhi iphethwe yiqembu le-MásMóvil e-Spain ngobuchwepheshe be-4G.
Ihlinzeka ngamaphakheji e-inthanethi namanani eselula ngaphakathi kwezinsizakalo zayo. Ungathola umugqa we-Pepephone ngentengo enhle futhi ama-megas ongawadli ungawaqongelelaYingakho ingenye yabasebenzisi bezingcingo abathandwayo.
Le nkampani inesevisi yekhwalithi ephezulu, ibonakala ngamanani ayo ngaphandle kokuhlala unomphela lapho ungeke ukhokhe lutho ukuze ubhalise noma ukufakwa. Ngaphezu kwalokho, inohlelo lokusebenza lwe-iOS kanye namaklayenti e-Android ukuze abe nokulawula kuselula yakho.
Ukwethembeka komsebenzisi nakho kungavuzwa izaphulelo ezijwayelekileLokhu kanye nokuphathwa kahle kwamakhasimende ayo kuyizinzuzo ezinkulu ezibonisa i-Pepephone. Uma ufuna ukuba iklayenti, sizochaza lapha indlela elula yokukwenza.
I-Pepephone yayinezinsizakalo zefoni ezikhokhelwa ngaphambili, kodwa okwamanje inkampani ayisanikezi lezi zinhlobo zamanani, ngakho-ke ngeke ukwazi ukubhalisela noma iyiphi yazo. Kodwa-ke, uma usuvele uyikhasimende elikhokhelwa ngaphambili, ungakhathazeki ngoba inani elifanayo lizogcinwa.
Kodwa uma ufuna ukushintsha, i-Pepephone ikunikeza enye indlela izimali zenkontileka, okuqinisekisa isevisi yekhwalithi, lapho ungakhuluma futhi uzulazule usuka kumakhalekhukhwini wakho ngaphandle kokuqaphela umehluko mayelana namazinga akhokhelwa ngaphambili.
Ukuze ushintshe izinsiza vele uthinte i-Pepephone ukushaya ngocingo noma ngewebhusayithi yakho. Khetha isilinganiso senkontileka oyifunayo futhi bazokuthumela i-SIM khadi yakho entsha, ukuze uqale ukujabulela zonke izinzuzo u-opharetha akunikeza zona ekuzulazuleni nasezingcingweni.
I-Pepephone inamanani enkontileka amaningana ukuze ukwazi ukukhetha evumelana nezidingo zakho. Ngaphezu kwalokho, ungathuthukisa inhlanganisela ezokuvumela ukuthi uthuthukise ukuxhumana kwakho. Ngamazinga enkontileka uzoba nokulawula okwengeziwe kwezindleko zakho.
Unenketho yokuqasha ukukhuluma kuphela noma uma ufuna okuthile okuphelele, bakunikeza Izinga elingenakulinganiswa ukuze ukwazi ukuntweza futhi ukhulume ngezindleko eziphansi, ngaphandle kokuhlala unomphela. Ubuye ube khona isiko lokho kukunikeza i-4GB kanye ne-7GB enqwabelene ukuze uzulazule futhi ngaphandle kokuhlala unomphela
Lesi silinganiso siyakunikeza 25 GB ngenyanga kanye nenzuzo yokuqongelela okusalile kwenyanga ezayo, uma idatha yakho iphela ungakwazi ukuphequlula ngaphandle kwezindleko ezengeziwe, kodwa ngesivinini esiphansi. Unezingcingo ezingenamkhawulo eziya kumaselula kazwelonke nezingcingo zasendlini, kanye nemilayezo yombhalo efakwe kumaselula kazwelonke.
Ukuze wenze inkontileka, faka i- Iwebhusayithi yePepephone bese uchofoza "NGIYAMTHANDA”. Okulandelayo, kufanele unikeze idatha yolayini ngokukhetha okukodwa kwezinketho ezi-3: uma ufuna inombolo entsha, letha inombolo yakho ekhokhelwa ngaphambili ku-Pepephone noma ulethe inombolo yenkontileka yakho ku-Pepephone.
Uma ukhetha inombolo entsha, izinketho ezimbalwa zizovela ukuze ukhethe leyo oyifunayo kakhulu. Khona-ke kufanele ulinde ukuthunyelwa kwempahla yakho universal sim card, eza ngosayizi abahlukahlukene ukuze ivumelane kalula neselula yakho. Manje cindezela "QHUBEKA".
Bese ugcwalisa i-imeyili nephasiwedi yakho, cindezela "QHUBEKA”Futhi qedela isicelo sakho ngolwazi oluceliwe lomuntu siqu, lokuxhumana kanye nekheli. Ukuze uqedele, uzoba nenqubo yokuthumela nenkokhelo kuphela.
Ngesilinganiso esiqondene nawe ungakhetha phakathi kwe-4 GB noma i-7 GB ukuze ukwazi ukuzulazula futhi ukhulume kusuka kumakhalekhukhwini wakho. Ngaphezu kwalokho, ungenza inhlanganisela oyifunayo phakathi kwe-GB ekhethiwe nalokho okukhokhayo ukuze ukhulume.
Ngokukhetha kwakho, izindleko zenani zizohluka. Kunoma iziphi izinketho chofoza "NGIYAMTHANDA”Ukuze ubhalise, kufanele ugcwalise yonke imininingwane.
Ngezinga lakho Elingaguqukiyo noma elenziwe ngezifiso unenketho yalo ukukhuluma nokuntweza noma ungakhetha khuluma nje. Khetha phakathi kokukhuluma iminithi elingu-1.001 ukusuka kumakhalekhukhwini kuya kolayini basendlini kanye namaselula kazwelonke ngama-euro angu-9 kuphela ngenyanga noma inani elingenayo imali lapho ukhokha khona lokho okushoyo kuphela. Chofoza ku-"NGIYAMTHANDA”Futhi ugcwalise imininingwane eceliwe.
Gcwalisa amanani akho e-Pepephone
Ukushaja kabusha noma yimaphi amanani akho e-Pepephone, amabhonasi enkontileka, wengeza i-GB futhi uphathe i-akhawunti yakho, ungakwenza usebenzisa I-PEPEPHONE YAMI nge-imeyili nephasiwedi yakho "NGENA I-AKHAWUNTI".
Ungakwazi futhi ukulanda i-Pepephone App kumakhalekhukhwini wakho. Ungena usuka lapha esigabeni sosizo bese uchofoza lapho isho khona "Uhlelo lokusebenza".
Okwamadivaysi e-Android landa uhlelo lokusebenza ku -Google Play futhi uma idivayisi yakho iyi-IOS landa uhlelo lokusebenza ngokusebenzisa Apple Store. Uma ukufakwa kumakhalekhukhwini wakho sekuqediwe, ukuze ufinyelele kufanele ufake i-imeyili yakho nephasiwedi esungulwe ekubhaliseni kwakho kwe-Pepephone.
Sebenzisa amakhadi akho esikweletu noma asebhange Ukuze wenze izinkokhelo zakho ngokunethezeka, ungenza idiphozithi noma udlulisele ku-akhawunti yakho yakwa-Bankia: ES46 2038 0969 4160 0005 1676 okubonisa emcabangweni i-ID yomuntu ongumnikazi welayini.
Phezulu kuselula » Izinkampani » Shaja kabusha iselula ye-Pepephone